China Amajikijolo, amajikijolo, amajikijolo, sitrobheli, okusajingijolo, i-bayberry ebomvu, umshini wokucubungula ama-cranberry kanye nefektri yokukhiqiza kanye nabakhiqizi |JUMP
I-Blueberry, i-blackberry, i-mulberry, i-strawberry, i-raspberry, i-bayberry ebomvu, umshini wokucubungula i-cranberry kanye nomugqa wokukhiqiza
Amajikijolo, amajikijolo, amajikijolo, ama-sitrobheli, okusajingijolo, i-bayberry ebomvu, umshini wokucubungula i-cranberry kanye nomugqa wokukhiqiza ungakhiqiza ijusi ecacile, ijusi elixubekile, ukugxila kwejusi, impushana yezithelo, ujamu wezithelo neminye imikhiqizo.
Amajikijolo, amajikijolo, amajikijolo, ama-sitrobheli, okusajingijolo, amajikijolo abomvu, umshini wokucubungula ama-cranberry kanye nomugqa wokukhiqiza angakhiqiza ijusi ecacile, ijusi exubile, ijusi, impushana yezithelo, ujamu wezithelo neminye imikhiqizo.Umugqa wokukhiqiza ikakhulukazi uqukethe umshini wokuwasha, ikheshi. , umshini wokuhlola, i-juicer yesikhwama somoya, ithangi le-enzymolysis, i-decanter, i-ultrafilter, i-homogenizer, umshini wokukhipha inzalo, umshini wokuvala inzalo, umshini wokugcwalisa, umshini ojwayelekile nezinye izingxenye zemishini.Lo mugqa wokukhiqiza uklanywe ngomqondo othuthukisiwe kanye nezinga eliphakeme lokuzenzakalelayo;Imishini eyinhloko yonke yenziwe ngensimbi engagqwali yekhwalithi ephezulu, ehlangabezana ngokugcwele nezidingo zokuhlanzeka zokucubungula ukudla.
Amajikijolo, amajikijolo, amajikijolo, amasitrobheli, okusajingijolo, i-bayberry ebomvu, umshini wokucubungula ama-cranberry kanye nephakheji yomugqa wokukhiqiza: ibhodlela lengilazi, ibhodlela lepulasitiki le-PET, ithini le-zip-top, iphakethe elithambile le-aseptic, ibhokisi lezitini, ibhokisi le-gable top, isikhwama se-aseptic esingu-2L-220L ngaphakathi isigubhu, iphakethe lebhokisi, isikhwama sepulasitiki, 70-4500g tin can.
Amajikijolo, amajikijolo, amajikijolo, amasitrobheli, okusajingijolo, amajikijolo abomvu, umshini wokucubungula ama-cranberry kanye nomkhakha wokukhiqiza:
Khetha izinto ezingavuthiwe ezintsha nezivuthiwe bese uhlanza ngamanzi kabili.
Izithelo zekilasi lokuqala: okusanhlamvu okubomvu okuluhlaza ≤ 5%, izithelo ezibolile ≤ 5%, ukufakwa ≤ 3%;
Izithelo zesigaba sesibili: okusanhlamvu okubomvu okuluhlaza ≤ 6%, izithelo ezibolile ≤ 8%, ukufakwa ≤ 5%.
Izinkomba zomzimba namakhemikhali: okuqukethwe ushukela ≥ 0.04g / ml, i-asidi isiyonke ≥ 25g / kg, i-asidi eguquguqukayo ≤ 3 × 10-4g / ml.
Ukuhlanza: ngaphambi kokwenza ijusi, ijusi kufanele ihlanzwe kahle futhi izingxenye ezibolile nezikhuntile kufanele zisuswe.Ngenxa yokuthi izinto zokusetshenziswa zivame ukucindezelwa ngesikhumba, uma zingahlanzwa, uthuli nokungcola kuzolethwa ejusi futhi kuthinte ikhwalithi.Izinga lokugeleza elikhulu le-nozzle ngu-20L / min-23l / min, futhi ibanga phakathi komlomo nesithelo ngu-17cm-18cm.
Kudingekile ukuchoboza ijusi ngaphambi kokucindezela ukwenza inqubo yokuchoboza nokucindezela ukuze kuthuthukiswe isivuno sejusi sezinto zokusetshenziswa.
Ijusi ikhishwa ingcindezi yangaphandle yemishini.Ngokwezidingo ze-bioengineering enzymolysis kanye nobuchwepheshe be-juicing, umklamo ofanayo wemishini kanye nokukhethwa kwemishini yokukhishwa kwejusi kanye nesistimu yokuhlukanisa kwenziwa;futhi kwakhiwa indawo yokugcina ebandayo ukuze kunwetshwe isikhathi sokujuxuza kwamajikijolo asendle ukusuka ezinsukwini ezingama-30 ezihambisana nesikhathi sokukha (inkathi yokukha uJulayi no-Agasti minyaka yonke), kanye nezinsuku zokusebenza ezingama-45-60, okuthuthukise kakhulu izinga lokusetshenziswa kwemishini. kanye nezinzuzo zezomnotho zalo mzila wokukhiqiza ijusi ogxilile.
Susa izinhlayiya ezimahhadla noma izinhlayiya ezimisiwe ezihlakazeke kujusi.Usayizi wembobo yesihlungi cishe ngu-0.5mm.
I-pectin equkethwe kujusi izokwenza ijusi ibe yi-turbid, ngaphezu kwalokho, ingavikela ezinye izinto futhi ivimbele ukucaciswa kwejusi.I-Pectinase isetshenziselwa i-hydrolyze i-pectin kujusi yesithelo, ukuze ezinye izinto ezikujusi zilahlekelwe ukuvikelwa kwe-pectin futhi zihlangane ndawonye ukuze kufezwe inhloso yokucaciswa.Ngokuvamile, umthamo wokulungiswa kwe-enzyme ngu-0.2% - 0.4% wekhwalithi yejusi yezithelo, futhi izinga lokushisa lilawulwa ku-50 ℃ amahora angu-3-4.
Ukuvikela umbala, ukungasebenzi kwe-enzyme kanye nokuvalwa inzalo
Isithelo samajikijolo asendle sicebile ngezakhi ze-antioxidant VC, VE kanye ne-β - carotene.Ngaphezu kwalokho, iqukethe nezinhlobonhlobo ze-anthocyanins zemvelo ezincibilika emanzini, ezinomphumela omuhle kakhulu wokwelapha ezifweni eziningi ze-ophthalmic.Ngakho-ke, kuyadingeka ukusebenzisa ukuvikelwa kombala kanye nobuchwepheshe bokungasebenzi kwe-enzyme ukuze ukwandise ukugcinwa kwezinto ezisebenzayo ohlelweni lokucubungula.Ukuvala inzalo ukubulala ama-microorganisms ukuvimbela ukubola, okunye ukuvala umsebenzi we-enzyme ukuvimbela ukwenzeka kwezinguquko ezihlukahlukene ezimbi.Kusetshenziswe inzalo esheshayo yokushisa okuphezulu kakhulu.
Ngale ndlela, isikhathi sokuhlushwa singafinyezwa futhi umbala nokunambitheka kwejusi kungagcinwa.Ngemva kokugxilisa ingqondo, ezinye zazo zigcinwa futhi zidayiswe njengejusi egxilile, kanti ezinye zisetshenziswa njengeziphuzo ezinomsoco.
Okwedlule: Umango, uphayinaphu, upopo, umshini wokucubungula amagwava kanye nolayini wokukhiqiza
Olandelayo: Umnqumo, iplamu, i-bayberry, ipentshisi, ibhilikosi, umshini wokucubungula iplamu kanye nomugqa wokukhiqiza
Isitashi Sommbila Siphelele Ulayini Wokukhiqiza Wofulawa ...
Iphrojekthi ye-Aqua Hydroponics Poly-houses Structure
I-Factory Direct Sales Industrial Metal Detector ...